thinzar's blog: January 2014
ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့ spec ကိုလိုက်ဖတ်ရင်း ကိုယ်မသိသေးတဲ့/စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ terminology လေးတွေအကြောင်း လိုက်ရှာဖတ်ပြီး အတိုချုံး ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
1. MHL vs. SlimPort®
mobile device+adapter+external display = extended experience
− MHL နဲ့ SlimPort နှစ်ခုလုံးက မိုဘိုင်းဖုန်း ရဲ့ microUSB ကနေ ပြင်ပ display မျက်နှာပြင်တစ်ခုခုနဲ့ audio/video ချိတ်ဆက်သုံးလို့ရတဲ့ နည်းပညာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
− အရင်ထွက်ပြီးသား Android ဖုန်းတော်တော်များများမှာ MHL ပါပြီးတော့ Nexus 4, Nexus5နဲ့ Nexus 7, Asus Padphone လောက်ဘဲ SlimPort နဲ့ ထုတ်ထားတာရှိသေးတယ်။ (List of MHL-ready phones၊ List of SlimPort devices )
− MHL ကို HDMI devices တွေနဲ့ဘဲ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတောင်မှ HDTV နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင် MHL-certified HDMI input ရှိတဲ့ တီဗီမျိုးမှ ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ SlimPort ကိုတော့ HDMI, VGA, DVIA, DisplayPort အားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်သုံးလို့ ရပါတယ်။
− MHL adapter တွေက external power လိုပြီး SlimPort က မလိုပါဘူး။ MHL 2.0 နောက်ပိုင်းမှာ external power သပ်သပ် မလိုတော့ပေမယ့် main device ကနေ ပါဝါတော်တော်စားသေးတယ်လို့ သိရတယ်။
- SlimPort ရဲ့ speed က MHL ထက် ၂ဆလောက် ပိုမြန်တယ်။ SlimPort က Full HD ကို support လုပ်တယ်။
- MHL ကော Slimport ရော Android phone/tablet တွေကနေ Adapter နဲ့ display ကိုချိတ်တဲ့အခါ ဒေါင်လိုက်မရဘဲ အလျားလိုက် တစ်ခုဘဲရတာကိုတော့ သိပ်သဘောမကျပါဘူး။ application တွေကို demo လုပ်ရ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ဂိမ်းဆော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်လောက်ဘဲ အဆင်ပြေမယ်။ video ရော audio ရော ချိတ်ဆက်သုံးလို့ရတာဆိုတော့ Surround Sound speaker တွေရှိရင်တော့ တော်တော်မိုက်မယ်။
video: Slimport In Action
SlimPort က သုံးရပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ရပေမယ့် သူ့နည်းပညာက free မဟုတ်တော့ နောက်ပိုင်းလည်း devices များများ ထပ်ထွက်ဖို့တော့ မရှိလောက်သေးဘူး။ MHL ကတော့ လူသုံးပိုများတဲ့ စံနှုန်းဖြစ်နေသေးတယ်။ MHL 3.0 မှာလည်း တော်တော်တိုးတက်လာတော့ နောက်ပိုင်းဆို SlimPort နည်းပညာကို မှီလာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
Gorilla Glass က US ကုမ္ပဏီ Corning Inc. ရဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပြီး ပြုတ်ကျရင်တော်ရုံမကွဲ၊ ဖိအား တော်တော်ပြင်းတာကိုခံနိုင်ပြီး၊ တော်ရုံခြစ်ရာမထင်တဲ့ မှန်တစ်မျိုးတဲ့။ ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများ Corning Gorilla Glass နဲ့ ထုတ်လာကြတယ်။ ပိုက်ဆံတစ်အားပေါတဲ့သူတွေ drop test, scratch test လုပ်ထားတာ youtube မှာ အများကြီးဘဲ။ ကားနဲ့တက်ကြိတ်တဲ့သူတောင်ရှိသေး။ :D အဲလိုပေါက်တတ်ကရလုပ်ရင်တော့ screen အောက်က display ကတော့ ပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ မှန်ကတော့ မကွဲဘူး။ ခြစ်ရာလည်း တော်ရုံမထင်ဘူး။ အမှန်ဆို gorilla glass နဲ့ဖုန်းတွေက screen protector တောင်မလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းအသစ်ဝယ်ရင် screen protector ကပ်ရမယ်ဆိုတာကြီး အရိုးစွဲနေတော့ ကပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တယ်။ :D
3. Dragontrail Glass
Dragontrail Glass ကြတော့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ထုတ်တာ။ သူလဲ တော်ရုံခြစ်ရာမထင်ဘူး၊ တော်ရုံကျရင် မကွဲတဲ့ မှန်မျိုးပေါ့။ Gorilla glass လောက်တော့ မမာဘူးထင်တယ်။ Sony Xperia Z1 တို့ Galaxy Nexus တို့က Dragontrail Glass နဲ့ ထုတ်ထားတာ။
Oleophobic ဆိုတာ ဂရိစာလုံးဖြစ်ပြီး "Afraid of oil" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဖုန်း screen တွေမှာ လက်ဗွေရာ သိပ်မထင်အောင် Oleophobic Coating ထည့်ကြတယ်။ အဲဒီ coating ပါတာ ခုထိတော့ iphone, ipod, ipad တွေလောက်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ car wax polish တွေဖြန်းပြီး Oleophobic coating DIY လုပ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။
5. Smartphone Sensors
စမတ်ဖုန်းတွေမှာ အခု sensor ပေါင်းစုံပါလာတယ်။ Accelerometer က orientation အတွက်၊ gyroscope က ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်ထည့်ထားတာ။ barometer ပါလာတာ ထူးဆန်းတယ်။ GPS က latitude, longitude, altitude နဲ့ 3-dimension တွက်ရတော့ အြမင့်ကို တွက်ဖို့အတွက် barometer တွေထည့်ထားတာတဲ့။ လေဖိအားရော တိုင်းလို့ရမလားမသိဘူး။ Galaxy S4 နဲ့ Note3မှာဆိုရင် temperature sensor, humidity sensor တွေတောင်ပါတယ်။ နောက်ဆို ဖုန်းတွေမှာ ဘာ sensor တွေ ထပ်ပါလာဦးမလဲမသိ။
GLONASS ဆိုတာ ရုရှားကနေ navigation အတွက်သုံးဖို့ လွှင့်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တုစနစ်။ ဂြိုလ်တုပေါင်း ၂၄ခု လွှင့်တင်ထားပြီး ရုရှားအတွက် သုံးဖို့ အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာသုံးရင် ပိုတိကျတဲ့အဖြေကို ရတယ်တဲ့။ GLONASS ကို support လုပ်တဲ့ ပထမဆုံး smartphone က iPhone 4s တဲ့။ ခုနောက်ပိုင်း ၂၀၁၃မှာထွက်တဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများရယ်၊ Garmin device အသစ်တွေရယ်က GPS ရော GLONASS ရော ၂မျိုးလုံး support လုပ်တယ်။ GPS တစ်မျိုးတည်းသုံးတဲ့ ဖုန်းတွေထက် ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ပိုတိကျတဲ့ positioning ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂ခုလုံးကို support လုပ်တော့ turn-by-turn navigation သုံးရတာ ပိုအဆင်ပြေလာတယ်။ EU ကလည်း Galileo လို့ အမည်ရတဲ့ ဂြိုလ်တုစနစ်ကို ၂၀၁၄မှာ သုံးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ကလည်း Compass Navigation System ဆိုပြီး ဂြိုလ်တု ၃၅လုံးလွှင့်တင်ထားပြီး GPS ထက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်တဲ့။ GLONASS ကို support လုပ်မလုပ်က processor/chipset နဲ့ဆိုင်တာ။ ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ snapdragon processor တွေအကုန် GLONASS ကို support လုပ်တယ်တဲ့။
- GPS and GLONASS: "Dual-core" Location For Your Phone